Malunga nathi - Shanghai Jiesheng Robot Co., Ltd.
Ungathenga okanye uthengise izabelo Shanghai Jiesheng Robot Co., Ltd.
Yasekwa ngomhla we-23 kuFebruwari 2011, iShanghai Jiesheng Robot Co., Ltd.yishishini elibanzi lobuchwephesha eligxile kuphando nakuphuhliso, imveliso, kunye nentengiso yezixhobo kunye nezinto kumacandelo eerobhothi zeshishini, ukuwelda kunye nokusika, kunye nokubonelela Iinkonzo zobugcisa ezibanzi. Ezona mveliso ziphambili zenkampani: iirobhothi zaseYaskawa, iiseli zomsebenzi wokuwelda, isikhululo sokusebenza sewelding, igumbi lokusebenza kwewelding, izixhobo zokuwelda kunye nezinye izinto.
Iminyaka eli-10 yomsebenzi onzima, iminyaka eli-10 yokwenza ngocoselelo, kunye neminyaka eli-10 yokunikezelwa kwenkonzo, uShanghai Jiesheng usebenze nzima kwicandelo leerobhothi, ezimisele ukwenza izinto ezintsha, kwaye uzuze iziphumo ezineziqhamo kwaye wacokisa inkampani ekhokelayo kushishino lweerobhothi. Iprojekthi nganye emva kwenye ihanjiswa ngempumelelo, kwaye umgca wemveliso omnye emva komnye uziswe ngokugqibeleleyo. Emva koku ngumsebenzi onzima wabasebenzi bethu baseJiesheng ukusuka kuyilo ukuya kwimveliso ukuya kunikezelo.
Njengoko kuchaziwe ngu-Chen Lijie, umphathi jikelele we-Jiesheng, i-Jiesheng kufuneka asebenzise isicwangciso-qhinga sophawu lwenkonzo, umthengi sisiseko, kwaye abasebenzi ziingcali ezisebenzisa isicwangciso sophawu. Kuphela ngokuqhubeka ngokuqhubekayo kunye nokucokisa iinkqubo zethu ezimiselweyo kunye nokunxibelelana nokwoneliseka kwabathengi esinokuthi siphumelele. Ngokumiliselwa kwesona sicwangciso "sisebenzayo" sophawu lwenkonzo, siya kudala iqela lokwoneliseka kwabathengi kunye neshishini le-boutique elinabasebenzi abonwabileyo.
Ukuqinisekiswa kwemizi-mveliso kwinkampani kunye nokuthenjwa kwabathengi kwinkampani kumisela ukuba ingahamba iye kufikelela phi kwintengiso. Iminyaka elishumi ngumzuzu nje omfutshane emfuleni omde wembali. KuJiesheng, iminyaka eli-10 yiminyaka eli-10 yenguqu kunye nophuhliso, iminyaka eli-10 yendalo eqaqambileyo, kunye neminyaka eli-10 yokukhula ngokukhawuleza. Xa sele siza kuqalisa uhambo olutsha, bonke abasebenzi bethu eJiesheng bazele ngamandla, bakulungele ukwamkela iminyaka eli-10 elandelayo ezukileyo.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kwi-arc welding, indawo ye-welding, i-gluing, ukusika, ukuphatha, ukuthambisa, ukupeyinta, uphando lwezenzululwazi kunye nokufundisa. Nika uyilo lwezixhobo ezizisebenzelayo, ufakelo kunye neenkonzo emva kokuthengiswa kwabavelisi bezinto ezizenzekelayo.
Isicwangciso seNkampani: Nika izisombululo zokuzenzekelayo zaseTshayina kubathengi behlabathi;
Ifilosofi yethu: Yiba ngumthengisi okumgangatho ophezulu wezixhobo zeerobhothi;
Ixabiso lethu: Iqela elikhuphisanayo, ubuvulindlela kunye nokuzama, ukuvelisa okuqhubekayo, kunye nesibindi sokucela umngeni;
Umsebenzi wethu: Sinika abathengi iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezikumgangatho ophezulu;
Itekhnoloji yethu: Ixhaswe liqela lobuchwephesha eliphezulu.
Idilesi yekomkhulu: Hayi 319, Huting Road, kwiSithili saseSongjiang, eShanghai
Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis,